You chọrọ ihu elekere ọhụụ maka smartwatch gị? - Facer Daily Mix nwere ike inyere gị aka | Gam akporosis
You chọrọ ihu elekere ọhụụ maka smartwatch gị? - Facer Daily Mix nwere ike inyere gị aka
You na-achọ Ngwa maka Smartwatch nke China? Y’oburu na inwere igwe elekere, o nwere ike buru na onwere akara aka ma obu igwe oku nke igha igbanwe dabere na ihe ichoro. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ike gwụrụ gị ugbu a ihu elekere ugbu a ma chọọ inwe ihe ọhụrụ kwa ụbọchị, enwere ngwa nwere ike inyere gị aka na nke a.
Ngwa, a na-akpọ Facer Daily Mix, e mepụtara iji gbochie gị ịgwụ na interface nke smartwatch gị site na ọrụ "Daily Mix", nke na-enye ihu elekere ọhụụ kwa ụbọchị n'ụzọ dị egwu.
1 Isi ọrụ nke Ihu
2 Budata Ihu Igwe Ihu
Isi ọrụ nke Ihu
Dị ka ndị kere ya si kwuo, Facer Daily Mix bụ "dị ka igwe oghere maka ihu elekere", ebe ọ na-enye onye ọrụ ohere Họrọ otu n'ime ngalaba 10 na-enweghị usoro dị kwa ụbọchị.
Mana nke kachasị, Facer ugbu a nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ elekere 20.000, yabụ ị ga-enwe ọhụụ na ngalaba ọhụụ maka ịchọpụta gị. Na mgbakwunye, site na ngwaọrụ okike ya, ị nwere ike mepụta ihu nche gị ịkesa ha na ụwa ndị ọzọ, agbanyeghị na iji nnukwu nchekwa data dị otu a, n'ezie ọ gaghị adị mkpa ịme ihu elekere gị.
Nke a bụ nchịkọta nke isi ọrụ nke Facer:
Ohere nke ibubata na idezi onyonyo obula ichoro
Nchịkọta akara ngosi Weather
Nnukwu nchịkọta ederede ederede
Ọtụtụ atụmatụ maka ụbọchị na oge
Ike mmekọrịta na animated
Dynamic nsio na batrị larịị, nzọụkwụ counter, WiFi egosi
Kwekọrọ n'Ozizi na gam akporo Wear niile
Dịka ị pụrụ ịhụ na vidiyo dị n'okpuru, ọ dị mfe ịchọta ihu nche ma gbanwee ha site na njirimara Facer's Daily Mix.
Ọ bụrụ na ị nọ na-eche, Ihu Watch Faces dakọtara na smartwatches niile na sistemụ arụmọrụ 2.0 Weebụ Weebụ, na ọbụna na Samsung Gear S3 na Gear S2 nche dabere na ikpo okwu Tizen.
Ọ bụrụ na ịnweghị igwe elekere ma na-achọ kacha mma China smartwatchGa-ahụ ha na njikọ nke anyị hapụrụ gị.
Budata Ihu Igwe Ihu
Ihu: na akwụkwọ ahụ aja
Developer: Ụlọ ihe nkiri Facer
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » You chọrọ ihu elekere ọhụụ maka smartwatch gị? - Facer Daily Mix nwere ike inyere gị aka
Google Maps nwere ike ịmalite igosi mgbasa ozi
Xiaomi Mi 6, rere ya na sekọnd na nke mbụ ya na ire ere